LISITRY NY FIOMPIANA ALIKA MIHAZA - ALIKA
Lisitry ny fiompiana alika mihaza
'Ity i Xerxes, my Bluetick Coonhound enim-bolana ary Loki, ny Cur mix . Niofana niaraka tamin'ny tranom-boaloboka tao an-tokotaniko tany Covington, Georgia izahay. '
Ity dia lisitry ny karazana izay mbola ampiasaina amin'ny fihazana ankehitriny. Ny alika mpihaza dia sokajiana hounds, alika basy, feist, terriers ary ozona. Avy eo dia zaraina ho alika manitra sy mahita ary manara-maso. Ny sasany amin'ireo karazana dia manana mihoatra ny iray amin'ireo talenta ireo. Betsaka koa no manome biby fiompy tsara raha zatra tsara. Ny tsipika fihazana sasany dia nompiana ary notezaina alika lalao .
Venerie afovoany anglisy-anglisy (sary ilaina)
Anglo-frantsay an'ny Petite Venerie (sary ilaina)
Coonhound English English
Alika Squirrel Amerikanina (ilaina ny sary)
Spaniel rano amerikana
Barista Stock Feist
Feist tongotra tongotra (sary ilaina)
Black sy Tan Coonhound
Hound Black Hound
Cur vava mainty
Elkhound Norveziana Mainty
Spaniel Blue Picardy
Braque D'Ariege (ilaina ny sary)
Braque D'Auvergne (ilaina ny sary)
Braque Dupuy (ilaina ny sary)
Braque Saint-Germain (ilaina ny sary)
Braques Francaises (ilaina ny sary)
Alika Squirrel Cajun
Camus Cur (ilaina ny sary)
Retriever mifono olioly
Pointer alemana Wirehaired
Alika Drentse Partridge
Laika Siberia Atsinanana
Spaniels Picardy (ilaina ny sary)
Retriever mifono fisaka
Espaniola Brittany Spaniel
Pointer lava-lava Alemanina
Pointeraner alemà (ilaina sary)
Laboratoara fohy alemana
Pointer Shorthaired Alemanina
Laboratoara Wirehaired Alemanina
Griffon Fauve de Bretagne (sary ilaina)
Grand Anglo-Francais (ilaina ny sary)
Henderson Cur (ilaina ny sary)
Hertha Pointer (ilaina ny sary)
Red Setter mena sy fotsy
Spaniel Rano Irlandey
Istrian Coarse Hound Hound (ilaina ny sary)
Alika Orsa Karelian
Kemmer Cur (ilaina ny sary)
Hound Majestic Hound
Cur View Mountain
Alika akoho taloha Danoa
Cur Mountain original
Pollell's Carolina Cur
Pistily amin'ny rambony pensily (ilaina ny sary)
Burgos Perdiguero (sary ilaina)
Perdiguero Navarro (ilaina ny sary)
Pont-Audemer Spaniel (ilaina ny sary)
Alika bitika portiogey (ilaina ny sary)
Alika Rano Portiogey
Russo-European Laika (ilaina ny sary)
Torohevitra lava volo Slovakyana
Hound Swiss kely
Curry atsimo Blackmouth
Alika amin'ny rano Espaniola
Stichelhaar (ilaina ny sary)
Soedoa Elkhound (antsoina koa hoe Jamthund) (sary ilaina)
Treeing Farm Shepherd (ilaina ny sary)
Mpanohitra an'i Las Encartaciones
Weather Siberia Andrefana
Cur Mountain Andrefana
Mpanohitra ny Encartaciones
Xerxes, a Bluetick Coonhound enim-bolana miaraka amin'i Loki, a Cur mix hazo hazo a Raccoon
Xerxes, a Bluetick Coonhound enim-bolana miaraka amin'i Loki, a Cur mix hazo hazo a Raccoon —Loki dia ao anaty hazo.
Loki, a Cur mix fiofanana miaraka amin'ny rakikira ao anaty tranom-borona
'Fanahy (havia) sy Otto (ankavanana) eo am-piasana ao amin'ny 11 herinandro! tsara alika mpiambina , mpihaza kisoa ary mpiompy ! Asakasak'izy ireo Cur vava mainty sy tapany Mpiandry Alemanina ! Kickin 'vody hatramin'ny 6 herinandro.'
isan-kerinandro alika mpitari-dalana vohoka
Black sy Tan Coonhound purebred.
'Ity i Bonnye Mal (ilay alika antsasaky ny vatan-kazo). Zaza 2 taona izy Treeing Walker Coonhound . Bonnye dia nalaina avy amin'ny toeram-pialofana biby teny an-toerana fony izy tokony ho 1 taona taorian'ny tsy nitaky azy ny tompony. Bonnye dia tena mamy ary maniry fatratra ny hampifaly sy ho tia ny saina fa tsy dia mifintina loatra. Hosedrainy aho indraindray nefa voafehy mora foana. Manana fandaharam-potoana izy ary aleony mifikitra amin'izany. Ohatra, amin'ny andro fikarakarana zaza dia efa vonona izy ary handeha amin'ny 6:00 maraina, raha tsy izany dia aleony matory. Tsara be izy miaraka amin'ny ankizy ary tsy rototry ny saka . '
Ny alika hafa amin'ny sary dia toy izao, ' Ny alika mainty sy fotsy miankina amin'ny hazo eo akaikin'i Bonnye dia 1/2 Great Dane ary 1/2 Bull bull na angamba mpanao ady totohondry . Tsy haiko ny anarany fa alika milay be izy. Ny alika tongotra 3 dia a Saluki Teraka tamin'ny ranjony izy ka notapahin'ireo tompony fony izy pup. Misy koa a Mpiandry Alemanina , mankany Lab sôkôla , Lab mainty , ary maro hafa karazana mifangaro . Fikarakarana tsara be izao. '
bruxelles griffon frantsay bulldog mifangaro
'Bonnye (ilay Treeing Walker Coonhound izay antsasaky ny vatan-kazo) dia mety nanana fiofanana mihaza talohan'ny nahitanay azy. Mandroritra izy rehefa mahazo fofona ary handratra ho marokoroko. Ao amin'ny sary nalaina tamin'ny fikolokoloana, dia namakivaky ny Lucky squirrel monina monina amin'ny hazo pecan ao amin'ny fikarakaran'i Bonnye izy. Bonnye dia mampianatra ny sakaizany hiakatra hazo. Mandeha amin'ny fikarakarana zaza indroa mandritra ny herinandro izy mandritra ny fotoana iasako. Ankafiziny ihany koa ny zaridainan'ny alika eo an-toerana izay feno squirrels. Manana toetra mahafinaritra sambatra sy sambatra izy nanomboka tamin'ny andro 1! '
'Mijery an'i Cesar Millan aho isaky ny mahazo ahy. Ny filozofia dia niasa tsara ho ahy sy ny alika. Mora be ny mampiofana azy na dia zavatra vitsivitsy aza no ampiasainay. Fantany fa izaho no mpitarika ny kitapom-batsy ary toy izany koa aho — izany dia miteraka fifandraisana salama sy sambatra. Matoky azy aho ary matoky ahy izy. '
Fantatro fa any ambony any ny squirrel!
Pyrenees lehibe 7 volana
ary izay tsy mainty teacup mainty Chihuahua
saint bernard afangaro amin'ny dane mahafinaritra
Terre boston 5 volana